Mario Balotelli: "Waxaan ku laabanayaa Manchester City " - Ceelhuur Online
Home > Ciyaaraha > Mario Balotelli: “Waxaan ku laabanayaa Manchester City “
December 21, 2017 Hafsa Haji289
Weeraryahanka kooxda AC Milan Mario Balotelli ayaa shaaca ka qaaday inuu weli jecel yahay Manchester City, islamarkaana uu ku faraxsanaan lahaa inuu kooxdiisii ​​hore u ciyaaro mar kale.
27 jirkaan ayaa inta badan lagu dhaleeceeyay xanaaq badan intii lagu jiray labada sano iyo bar ee garoonka Etihad Stadium, waxaana weli xasuus uu ku leeyahay taageerayaasha gudaha iyo banaanka garoonka.
Balotelli ayaa kubad fiican la yimid Ligue 1 tan iyo markii uu ku soo biiray Nice sannadkii hore, isagoo 16 gool dhaliyay 21 kulan oo uu ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan waxa uuna u soo ciyaaray kooxaha Liverpool iyo AC Milan.
Man City ayaa dib ugu soo laabatay mustaqbalka wali waxa ay dooneysaa xiddiga heerka caalami ee dalka Italy, laakiin wuxuu qirtay in ay halis ku jirto marxaladii hore ka dib markii uu kaga soo biiray Inter Milan.
“Waan jeclahay Manchester City, waan jeclahay taageerayaasha Manchester City, waan jeclahay kooxdaan,” ayuu u sheegay La Gazzetta dello Sport. “Waxaan ku laaban lahaa City si bilaash ah, aniga ahaan, sanadkan Manchester City ayaa aheyd kan ugu fiican nolosheyda.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku noolaado Manchester, taas oo ka duwan London, wax yar ayaan ku dhibtooday, laakiin waxaan ka hadlaya kubada, Manchester City waa cajiib, waan ku faraxsanahay inay si fiican u shaqeynayaan, waxaana rajeynayaa inay sii wadi doonaan inay ku guuleystaan ​​Premier League horayba.
“Waxaan diirada saarayaa inaan ku soo laabto koox weyn, waxaan ku guuleysan karaa wax muhiim ah, mar kale AC Milan waa adag tahay in la yiraahdo, waxaa jiri lahaa cadaadis igu aaddan sida ugu danbeysay. [Marco] Fassone ayaa sheegay in ay fiicnaan laheyd in aan sameynin. ”
Balotelli ayaa Man City kaga soo biiray AC Milan bishii Janaayo 2013 ka dib waxay isku dhaceen Roberto Mancini.
Al-Shabaab oo Weerar ka gaystay Afgooye
Mar hadii C/raxmaan Danbi lagu waayay Muhiim in la helaa Cid qaadata Masuuliyada Xasuuqii Askartii iyo Kufsigii Sharciga!
Barcelona Oo Doonayso Ryan Sessegnon & Anthony Martial
April 17, 2018 Hafsa Haji
Everton Oo U Dhaqaaqday Saxiixa Adnan Januzaj
July 18, 2018 July 18, 2018 Hafsa Haji
Fernando Torres Oo Ka Tagaya Atletico Madrid Bisha Janaayo
November 2, 2017 Hafsa Haji